Akhriso:-Taariikh-nololeedkii Abwaan Cabdillaahi Ciise SINGUB Oo Geeriyooday. - Awdal Media
Sangub markii da’diisu shan jir gaadhay ayuu ku bilaabmay u hilowga fanku. Dhalinyaranimadiisii, wuxuu ku soo caan baxay ciyaaraha dhaqanka, gaar ahaan ciyaarta “Dhaantada” Ka sokow dhinaca Ciyaaraha dhaqanka Sangub, wuxuu ahaa gabayaa ka hida qaba qoys wada gabya, sida aabihii, abtiyaashii iyo walaalihii intuba way gabyi jireen.
Bilowgii sannadkii 1961 ayuu tagay magaalada Hargeysa oo uu muddo kooban Joogay, isla sanadkaas ayuuna u wareegay magaalada Muqdisho
Riwaadaha sida wayn loogu xasuusto waxaa ka mid ahaa:
Waa Maadays Adduunyadu Dadkuna waa Matalayaan,
Xaajo Ugub, Geedigaa Kaa lumay iyo Qabyo oo uu sameeyey burburkii kaddib.
Sidoo kale waxa lagu xasuustaa ruwaayadii Ummad Wada Qorqodo ah baan Wax u Qeybi Leeyahay, iyo kuwa kale sida Heestii Afrikaay Hurudooy.